Jacqueline Godet: "Dagaalka la dagaallanka kansarku waa ganacsi kasta" - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB Jacqueline Godet: "Dagaalka la dagaallanka kansarku waa ganacsi kasta"
Jacqueline Godet: "Dagaalka la dagaallanka kansarku waa ganacsi kasta"
Wargeyska 24th ee Rencontres d'Occitanie wuxuu dhici doonaa Khamiis April Xogta Xarunta La Dépêche du Midi ee Toulouse. Jacqueline Godet oo ah haweeneydii ugu horreysey ee hogaamisa League League ee ka hortaga Cancer, ayaa noqon doona martiqaadka dhacdadan. Waxay faahfaahin doontaa tallaabada ururkan lagu abuuray 11 waxayna dib ugu laaban doontaa ururka Faransiiska ee la dagaallanka kansarka taas oo lagu ogaado dadka cusub ee 1918 350 sannad kasta.
Sidee ayaa Kansarka Laantu u dhalatay?
Horyaalka Kansarka wuxuu ka dhashay 1918 dhamaadkii dagaalkii koowaad ee aduunka. Faransiiska la xulufadeeda, Maraykanka iyo Boqortooyada Ingiriiska waxay ku abaabuleen hoggaanka Justin Godart kadibna Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Arrimaha Bulshada. Tani bani aadmi ah ayaa aad u dhuftay burburkii kansarka dhamaadkii dagaalka. 1920, horyaalka wuxuu noqonayaa mid faransiis ah, ururkana waxaa loo aqoonsan yahay in uu yahay adeegga dadweynaha. Ka dib Dagaalkii Labaad ee Adduunka, Justin Godart wuxuu dhiirrigeliyay abuurista guddiyo waaxeed. Waxaan leenahay 103 maanta, kuwaas oo intooda badan lagu abuuray sanadaha 50 iyo 60.
Muxuu ururkaagu maanta matalayaa?
Waxaan tirineynaa xubnaha 640 000 iyo mutadawacyada 13 000. Waxaa loo dooran karaa gudiyada guddiyada waaxda ama iskaa wax u qabso. Ka dibna waxay daryeeli karaan bukaanka, laakiin sidoo kale waa iskuulka dadweynaha. Hawl-galku waa isku-xirnaanshaha ururada 103 oo ay guddi kasta oo ka mid ah guddi-kooxeed ay leeyihiin jaan-gureed waa in ay yihiin lix aqoonsi-bulsheed sida Paris, Var, Côte-d'Or ama qabashada howlaha adeegga bulshada (Moselle, Haut-Rhin iyo Bas-Rhin).
Sidee loo maalgeliyaa?
96% maalgeliyadayada waxay ka timaadaa deeqsinimada dadweynaha. Khayraadka wuxuu ka yimaadaa musuqmaasuq, deeq-lacageed la ururiyey sanadka oo dhan iyo gaar ahaan inta lagu jiro abaabulka dhacdooyinka kala duwan ee ay abaabuleen guddiyadayada wasaaradeed. Ma helno deeq kaalmo. 4% dadka kale waxay ka yimaadaan deeqo ka yimaada dawladda hoose, gaar ahaan magaalooyinka. Wadar ahaan, waxaan maareynaa miisaaniyad 100 M € oo shaqaaleysiisana shaqaalaha 423 oo ay ku jiraan 105 oo ku yaal xarunta dhexe ee Paris.
Waa maxay tallaabooyinka aad qaadato dagaalka lagaga hortago kansarka?
Waxaan qabanaa afar xafiis oo muhiim ah: taageerida cilmi baarista kansarka, taageerida bukaanka, ficilada ka hortagga iyo dhowaan waxaanu ku doodaynaa mowduucyada sida glyphosate ee siyaasad dejiyeyaasha ama caqabadaha hortaagan baaritaanka kansarka midab-kala-soocid bulsho-aqooneed.
Sidee ayaa loola dagaallamayaa kansarka lagu soo bandhigay Faransiiska?
Kooxda ayaa door muhiim ah ka ciyaartay intii lagu jiray dawladaha guud ee kansarka ee 1998. Tani waa meesha asalka ah ee qorshaha kansarka iyo machadka Kansarka Qaranka. Waa maxay asalka Faransiiska ee la dagaallanka kansarka marka loo eego wadamada kale waa guusha qorshaha kansarka. Waxaan joognaa saddex. Urur goboleedka ayaa sidoo kale awood leh tan iyo markii ay haysato 7 kansar oo ku yaal France. Waxay dhisaan dhammaan kuwa ka shaqeeya dagaalka lagula dagaallamayo cudurkan: xirfadlayaasha caafimaadka ee aan horay u lahayn federaal, cilmi baarayaal, iwm. Canceropoles ayaa door muhiim ah ka ciyaartay qaabeynta la dagaallanka kansarka. Kuwani waa qalab aad u firfircoon ee la dagaallanka kansarka: saamayntoodu waa wax aad u fiican oo ku jira shaqada wadajirka ah ee aan u lahayn cudurada kale.
Waxaan ka fekerayaa qorshaha Alzheimers oo aan lahayn wax saameyn ah oo tababar ah sida qorshaha kansarka tusaale ahaan. Maxay farqiga u sameeyeen abuurista machadka qaranka ee la dagaallanka kansarka taas oo ah hay'ad dawladeed. Waa hubka hubaysan ee Gobolka oo siiya xoog badan oo gaar ahaan tarjumaadda hawlgalka ee doonista siyaasadeed.
Waxaan aragnaa kordhin joogto ah oo kansar ah marka laga reebo Occitania halkaas oo aan ku xasuusino xasillooni yar. Tirada kiisaska ayaa sii kordheysa, gaar ahaan da'da dadweynaha: da'da waynu helno, in badan oo naga haysata nasiib daro si aan u aragno suurtogalnimada dhacdooyinka korodhka kansarka. Waxa kale oo aanu ognahay kororka kansarka naasaha ee gabdhaha dhallinyarada ah. Waxaan hadda baadhaynaa sababta dumarka da'doodu ka yar tahay 35 ay yihiin dhibbanayaal. Wadar ahaan, waxaan ku ogaaneynaa xaaladaha kansarka 350 000 sannadkiiba oo France ah waxaanan la kulannaa dhimashada 157 000.
Celcelis ahaan waxaanu ku maamuli karnaa 60% kansarrada iyo xataa 80% carruurta iyo dhallinyarada. Halka natiijooyinka ay yihiin kuwa ugu adag in la helo waa burooyinka maskaxda ee carruurta ama kansarka feeraha ee dadka waaweyn. Muddo toddoba iyo sideed sano ah, horumarka ugu awooda badan ee immunotherapy waa in la abaabulo habka difaaca bukaanka si loola dagaallamo unugyada kansarka. Daaweynta Targeted ee u ogolaatay isticmaalka daroogooyinka aqoonsada unugyada kansarka ayaa sidoo kale muujinaya waxtarka sii kordhaya.
Dhammaanteen waxaanu leenahay doorka aan ka hortagi karno kansarka adoo bedelaya habka aan u noolahay: Muwaadiniinta oo dhan oo kaliya ma ah daryeelayaasha ama cilmi-baarayaasha ayaa dib u rogi kara kansarka!
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lindependant.fr/2019/04/09/jacqueline-godet-lutter-contre-le-cancer-est-laffaire-de-tous,8120766.php
Cameroon - Xakamaynta Daacuunka: Saddexda cudur ee cusub ee laga helay gobolka Waqooyi.
Kansarka Sambabka: Cabitaanka shaaha ama qaxwada badani waxay kordhisaa halista